विश्वकप खेल्ने अस्ट्रेलियन टोलीको घोषणा,को को परे टिममा? - Gokarna News
विश्वकप खेल्ने अस्ट्रेलियन टोलीको घोषणा,को को परे टिममा?
एजेन्सी – आईसीसी विश्वकप २०१९ का लागि अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय टोली घोषणा गरिएको छ । आरोन फिन्चको कप्तानीमा अस्ट्रेलियाले १५ सदस्यीय विश्वकप खेल्ने टोलीको घोषणा गरेको हो ।
सोमबार बिहान सावर्जनिक गरेको टोलीमा विगत एक वर्षदेखि ‘बल टेम्परिङ’ काण्ड पछि प्रतिबन्धमा परेपछि स्मिथ र वार्नर पछिल्लो एक बर्षयता अष्ट्रेलियन टोलीमा थिएनन् । प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै स्मिथ र वार्नरले अष्ट्रेलियन राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन् ।
‘बल टेम्परिङ’ को कारण प्रतिबन्ध खेपेका स्मिथ र वार्नरको प्रतिबन्ध जुन २६ बाट फुकुवा भएको थियो । गत बर्षको दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको तेस्रो टेष्ट क्रिकेटको दौरान अष्ट्रेलियाका खेलाडीले ‘बल टेम्परिङ’ गरेपछि तत्कालिन कप्तान र उपकप्तानलाई एक बर्षको निलम्बन गरिएको थियो ।
जार्नर र स्मिथ अहिले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्दैछन् । वार्नर सनराइजर्स हैदरावादबाट खेलिरहेका छन् भने स्मिथ राजस्थान रोयल्सबाट खेलिरहेका छन् ।
आरोन फिन्च (कप्तान), डेभिड वार्नर, उस्माना खवाजा, स्टेभन स्मिथ, साउन मार्स, अलेक्स कारेय, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन म्याक्सवेल, मिचेल स्टार्क, जेन सिचार्डसन, पाट कुमिन्स, जसन बेरेन्डोर्फ, नाथन कल्टर–नीले, आडम जम्पा, नाथल लियोन।